China N'èzí mma ọla kọpa mamiwota mmiri iyi ọkpụkpụ maka ire ụlọ ọrụ na-emepụta | Ọrụ Atisan
N'èzí mma ọla kọma mermaid mmiri iyi isi maka ere
Isiokwu: Mermaid ọkpụkpụ
TAG: Mkpụrụ obi Mermaid na Dolphin maka ire ere Bronze Mermaid na Dolphin Sculpture Life Size Bronze Mermaid Statue Outdoor Bronze Mermaid Statue
ọla kọpa mermaid mmiri isi iyi ọkpụkpụ
ọla kọpa, ọla kọpa, marble, Metal
N'èzí / Ogige cochọ Mma
Gold, ọla kọpa na ọla
H: 100-200cm ma ọ bụ ahaziri
Fofụfụ n'ime na igbe osisi
100% Aka Aka
Dị ihe oyiyi:
Isi iyi mmiri
Ihe Nlereanya oge ochie
Ime ụlọ na Mma doorchọ Mma
Resin / Bronze / Copper / Brass
Nkịtị Elu 1.3M ka 1.8M ma ọ bụ ahaziri
Colorcha nke mbụ / shinny gold / itatedomie oge ochie / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / nwa
ịchọ mma ma ọ bụ onyinye
Aka-eme na elu Polishing
Anwụ ngwa ngwa:
irè na okpomọkụ si -20℃ ruo 40℃. Ewezuga akụ́ mmiri igwe, ụbọchị mmiri ozuzo na-ezokarị, ebe snow na-ada.
Maka halllọ ezinaụlọ / ime ụlọ / temple / ebe obibi ndị mọnk / fane / scape / ebe isiokwu na wdg
Jiri nkwa ahia were nweta ihu ọma ọzọ! Ma ọ bụ site na L / C, T / T
Anyị nwere ike inye ọla kọpa busts, ihe oyiyi ndụ, akpụrụ akpụ okpukpe, akpụrụ akpụ mary, akpụrụ akpụ Jesus, mmụọ akpụrụ mmụọ ozi, ihe akpụrụ akpụ nke david, akpụrụ akpụ Buddha, guanyin ihe akpụrụ akpụ, akpụrụ akpụ anụmanụ, ọdụm ọla ọla, isi akpụrụ akpụ, akpụrụ ịnyịnya, ọdụm ọdụm, enyi. ihe akpụrụ akpụ, akpụrụ akpụ ugo, nwanyị ọtọ ọtọ, nwoke gba ọtọ, akpụrụ akpụ sexy, akpụrụ akpụ ubi, nwa ewu kpụrụ akpụ, ọla ọla, kọlụm ọla & ogidi, akpụrụ akpụ n'èzí, ime ụlọ akpụrụ akpụ, nwata nwere akpụrụ aja, akpụrụ akpụ ihe oyiyi, ọla ma ọ bụ isi iyi ọla, oriọna ihe akpụrụ akpụ, ihe akpụrụ akpụ, ihe akpụrụ akpụ tebụl, ihe osise na-anaghị agba nchara na ihe ndị ọzọ
Akụkọ banyere Mermaid
Dabere na akụkọ mgbe ochie, mermaid ahụ sitere n'úkwù, ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ nwanyị mara mma na ahụ dị elu, yana azụ azụ mara mma nke nwere akpịrịkpa na ahụ dị ala. Ahụ dum na-anwa ma na-adị mfe ịgbapụ ngwa ngwa. Ọtụtụ ndị ahịa dị ka amamaahịa a, n'ihi ya, anyị mepụtara ihe osise ọla edo dị iche iche ka ịhọrọ.
Omenala Bronze mermaid sculpture
Anyị na-anabata ahaziri ọla kọpa mermaid, n'agbanyeghị nha, ihe ma ọ bụ udi, ị nwere ike zụta ọkacha mmasị gị mamiwota ọkpụkpụ ebe a. Y’oburu n’acho inwe ihe mgbochu puru iche, anyi na eche nche gi.
Ọkachamara Production Plant
Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ọla kọpa anyị na ọtụtụ ndị ọkachamara na-akpụzi ọkaibe. Anyị ga-enye gị foto n'oge usoro mmepụta ma gaa n'ihu na nkwupụta site na nkwenye gị. Anyị na-ebupụ ọkpụkpọ ọla na ụwa, n'agbanyeghị ebe ị nọ, anyị ga-enyefe gị ya n'oge
Ajụjụ: Wokpu bụ atụmatụ oge Mbuga ozi?
A: N'ime 30 ụbọchị mgbe nwetatinye gbada-ugwo
Ajụjụ: Which okwu ugwos nwere ike ịnabata?
A:1.Site na T / T. 30% bu nkwụnye ego na 70% bu akwụ ụgwọ n'elu akwado mmepụta.
2.Site na L / C. Ga-abụrịrị na anya na ụlọ akụ amaara ama.
3.Western Union ma ọ bụ Paypal maka ọnụahịa nlele.
Ajụjụ: Kedu ihe bụ tọ dị mma nkwa?
A: 1.Blekpụrụ marble na-agbaso ụkpụrụ abụọ.
a) ASTM C503-05 na ASTM C1526-03 ejiri eke marble nke Ogbe.
b) Nkechienior omenkà si ogo ọkọlọtọ ma ọ bụ ndị ahịa ' arịrịọ.
2.Ọla nchara ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara na-agbaso ụkpụrụ abụọ.
a) Dika akuko nyocha ihe omuma site n'aka onye emeputa.
b)Nkechienior omenkà si ogo ọkọlọtọ ma ọ bụ ndị ahịa ' arịrịọ.
3.Jighi na ọkachamara quality management usoro nwere ike nabata onye nke atọ''s nnyocha, dị ka SGS ma ọ bụ wdg.
Ajụjụ: Wokpu bụ njem njem?
A: 1.Favorable na-eri n'ihi na oké osimiri njem ma ọ bụ ikuku ụgbọ elu si forwarder.
2. Nabata ọrụ DDU jiri ego dị mma.
Gaa Homelọ ahụ
Nke gara aga: Hot ere ọmarịcha nkume ubi ngwaahịa mmiri marble cherub isi iyi
Osote: Ogige okwute nke oge a jiri ọmarịcha mmiri n'èzí na-ere
New ngwaahịa ji achọ wuru nsụda mmiri fou ...
Hand pịrị n'èzí marble mgbidi isi iyi ...
Hot ire marble ubi akpụrụ akpụ n'èzí mmiri fou ...
Ubi na Home White Marble Wall Iyi
Metal akpụrụ akpụ ime ụlọ ji achọ ọla ọla ...
Ezi mma oge a na nkume mmiri n'èzí fountai ...